Maxay ka dhigan tahay Warqada uu Gudoomiyaha Gobolka Karkaar kasoo saraay Khilaafaadka Dhulka? • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Maxay ka dhigan tahay Warqada uu Gudoomiyaha Gobolka Karkaar kasoo saraay Khilaafaadka Dhulka?
Maxay ka dhigan tahay Warqada uu Gudoomiyaha Gobolka Karkaar kasoo saraay Khilaafaadka Dhulka?
Gudoomiyaha Gobolka Karkaar Saciid Maxamed Faahiye ayaa digreeto uu kasoo saaray Xafiiskiisa waxa uu ku amray Maamulada Degmooyinka, Gudigga Xalinta Khilaafaadka iyo Taliyaha Qaybta Gobolka Karkaar in ay ka hawlgalaan muranada la xiriira Dhulka oo Gobolkaan kusoo badanaya.
Dhawaan ayay ahayd markii Duqa Degmada Qardho uu walaac ka muujiyay xaaladaha gaarka ah ee la xiriira Dhulka, Isagoo sheegay in qarka loo saaran yahay in laysku dilo. Gobolka Iyo Dawlada dhexe ayuu ka codsaday in ciidamo xoog leh la keeno deegaanka si loo xaliyo muranada Dhulka.
Gudoomiyaha Qardho Cabdi Saciid Cismaan waxa uu sheegay in dadka ugu badan ee dhul boobka wada ay yihiin dadka Dawlada u shaqeeya iyo Kuwa Hantida leh.
Warqadaan kasoo baxday xafiiska Gobolka ayaa u muuqata mid la rabo in lagu ogaado tirada muranada dhulka ee degmooyinku xaliyeen iyo inta ay xalin waayeen ee u baahan in la ogaado iyo si gaar ah in dawladu ay doonayso in ay samayso awoodo ay ku fuliso go’aamada maxkamaduhu rideen ee la dhaqan geli waayay.